Sales pfungwa - Wenzhou Safewire Electric Co., Ltd
News & vanyora
Technical ruzivo garo
Sale pfungwa Safewire productsPlug uye Play:
The muwedzero chinouraya kana sikuruwa chinouraya misa iri optimally yakaronga pachako kutanga kugadzwa pakarepo. Kwete chete nenhumbi, asi pedyo butiro-ndiro chete IP55 kudzivirira pamwero zvinogonawo kushanda pamwe yemagetsi nokukurumidza simba uye date chiyamuro. Pakarepo kuwana zvinokosha vanoshandisa nokuti nzvimbo uye zvemagetsi rinoda kwakabatana uye mhosva munguva.
Close waya Mipata nomunyika pasi basa akakwirira. Data uye magetsi anogona kuparadzaniswa. Migero iine muedzo-kudzivirirwa uye zvimwe zvivako sezvo pomureza. Cable kunobuda pasi kunogona zvakananga kuwana runotikurudzira trunking hurongwa.
Integrates multi-zvigadziko uye mashoko kana makaseti configurations kupinda rimwe mudziyo zvakakwana, zvakavigwa pasi fanicha kana cabinet pamwe 80mm chete dhayamita buri saka kuponesa zvakawanda nzvimbo.
Kusanganisira nzwisisika 45 * 45mm panosangana, hunyambiri chengarava USB rairema mashekeri 5VDC 3.0 sezvo renguva voltage USB akangwara nokukurumidza nokuchengeta, rutsigiro QC3.0, Vachiita QUALCOMM indentification chip. Power kutendeuka zvazvingava anogona kusvika 80%. Kwete waya kubatana chete, asi vanotsigira Wireless ndinorova basa kusarudzwa zvinoenderana QI mureza.
The uriri nezvigadziko richiitwa chinja kana zvakabatana mudziyo uri nyore. Vari chiri pasi bvisika coverplate kana skirting uye anowanika mune Stainless kana ndarira. Uyezve, redu abuda mashandiro achange achifumira zvishoma nezvishoma madekwana kumhanya riri chinjika. Zvinoitwa yedu abuda mashandiro vane refu-upenyu nguva, yakavimbika kuita, muduku ruzha uye kushandisa njodzi etc. uyu damping mudziyo pfungwa kwave patented ne Safewire.
Safety-gadhi uye benzi-uchapupu design
Akawanda yedu yemagetsi panosangana muri siyana akangwara kudzivirira mashandiro kusanganisira kukuremedzai dziviriro, pamusoro-Temp dziviriro, pamusoro-voltage kudzivirirwa, pfupi redunhu dziviriro, pasi-voltage kudzivirirwa, zadzisa dziviriro etc.
Uyezve, redu yokufungidzira magadzirirwo remadziro anoramba kuenderana ne pasi sezvo 180 dhigirii kana yakazaruka. Inogona kudzivisa kuwira shure panguva installation. Kudzivirira Chiteshi waya mbudo kungaita waya waya kubva paburiro panosangana uye zvinobudirira achengetedze waya wire ganda pamusoro kunokuvadza. The Cable Exit pfungwa kwave patented ne Safewire.
© Copyright - 2010-2018: Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Rutsigiro globalso
Wedzera: 2nd pasi, Wealth Garden, Liushi Town, Yueqing guta, Wenzhou, Zhejiang, China